7 Iimfundiso NgoYesu Mhlawumbi Ungazi
Izinto Ezinokungazi NgoYesu
Iindaba Ezimangalisayo NgoYesu Kristu
Ucinga ukuba uyamazi kakuhle uYesu?
Kule miba yesixhenxe, uza kufumana izinto eziqhelekileyo malunga noYesu ezifihliweyo kumaphepha eBhayibhile. Bona ukuba ziphi na iindaba eziya kuwe.
1 - UYesu wazalwa ngaphambili kunokuba sasicinga.
Ikhalenda yethu yangoku, ekuthiwa iqala ukususela kwixesha likaYesu Kristu (AD, anno domini , isiLatini "ngonyaka weNkosi yethu"), ayilunganga.
Siyazi kwababhali beRoma ukuba iNkosi uHerode yafa ngo-4 BC Kodwa uYesu wazalwa xa uHerode esaphila. Enyanisweni, uHerode wayala bonke abantwana abesilisa eBhetelehem iminyaka emibini baze baxhelwa , bezama ukumbulala uMesiya.
Nangona umhla uxoxwa ngawo, ubalo lubalwe kwiLuka 2: 2 mhlawumbi lwenzeka malunga ne-6 BC Ukuthatha le ngcaciso kunye nezinye iinkcukacha, uYesu wazalwa ngokwenene phakathi ko-6 no-4 BC.
2 - UYesu wawakhusela amaYuda ngexesha lokufuduka.
Uqu-zintathu uhlala esebenza kunye. Xa amaYuda ebalekile kuFaro , enenkcazo encwadini yeEksodus , uYesu wabaxhasa entlango. Le nyaniso yayibonakaliswa ngumpostile uPawulos kwi- 1 kwabaseKorinte 10: 3-4: "Bonke badla ukutya okufanayo kokomoya, basela isiselo esifanayo somoya, ngokuba basela elameni elingokomoya elihamba nabo, kwaye lelo dwala linguKristu." ( NIV )
Le yayingeyona yodwa ixesha uYesu athatha inxaxheba kwiTestamente Endala.
Ukubonakala kwamanye amaninzi, okanye i -opopathies , ibhalwe kwiBhayibhile.
3 - UYesu akazange abe ngumbazi.
UMarko 6: 3 ubiza uYesu ngokuthi "umchweli," kodwa kunokwenzeka ukuba wayenabo uluhlu olubanzi lwezakhono zokwakha, kunye nokukwazi ukusebenza emithini, ilitye kunye nentsimbi. Igama lesiGrike eliguqulelwe ukuba ngumbazi ngu "tekton," igama elidlulileyo elibuyela kumbongi uHomer , okungenani ngo-700 BC
Nangona i-tekton ekuqaleni ibhekisela kumsebenzi ngomthi, yandisa ixesha elide ukuquka ezinye izinto. Abanye abaphengululi beBhayibhile bathi inkuni yayinqongophe ngexesha likaYesu kwaye ezininzi izindlu zenziwe ngamatye. Wafundiswa kwinqanaba lakhe- uYosefu , uYesu wayesehamba lonke elaseGalili, ekwakhiweni kwesikhungu kunye nezinye izakhiwo.
4 - UYesu wathetha ezintathu, mhlawumbi ezine iilwimi.
Siyazi kwiincwadi zeevangeli ukuba uYesu wathetha isiAramu, ulwimi lwamaSirayeli lwangaphambili ngoba ezinye zegama lakhe lamaAramaic libhalwa kwiZibhalo. NjengomYuda ozinikeleyo, wayethetha isiHebhere, esasetyenziswa kwimithandazo ethempelini. Nangona kunjalo, iintlanganiso ezininzi zasebenzisa iSeptuagint , iZibhalo zesiHebhere ziguqulelwe kwisiGrike.
Xa wayethetha neentlanga, uYesu wayencokola ngesiGrike, ulwimi lwezorhwebo eMbindi Mpuma ngelo xesha. Nangona singazi ngokuqinisekileyo, mhlawumbi uye wathetha nomphathi wekhulu waseRoma eLatin (Mateyu 8:13).
5 - UYesu wayengenakulungile.
Akukho nkcazo ebonakalayo ngoYesu ikhona eBhayibhileni, kodwa umprofeti uIsaya unikeza inkcazelo ebalulekileyo ngaye: "Wayengenalo ubuhle okanye ubuqaqawuli ukuba asikhange kuye, akukho nto ebonakala ngathi simele simkhonze." (Isaya 53: 2b, NIV )
Ngenxa yokuba ubuKristu betshutshiswa yiRoma, imifanekiso yokuqala yamaKristu ibonisa ukuba uYesu uvela kumalunga no-350 AD Imidwebo ebonakalisa uYesu ngeenwele ezinde zaziqhelekileyo kwiMinyaka Ephakathi kunye noKuvuselela, kodwa uPawulos wathi ku-1 kwabaseKorinte 11:14 ukuba iinwele ezinde zabesilisa " . "
UYesu wema ngenxa yezinto awayezithethayo nezenzileyo, kungekhona kwindlela awajonga ngayo.
6 - uYesu unokumangaliswa.
Ngamaxesha amabini amaxesha, uYesu wamangaliswa kwiziganeko. "Wamangaliswa" ukungabi nalukholo lwabantu kuye eNazarete kwaye wayengenakwenza imimangaliso apho. (Marko 6: 5-6) Ukholo olukhulu lomphathi wekhulu lamaRoma, weNtlanga, naye wamangaliswa, njengoko kuthethwe kuLuka 7: 9.
AmaKristu sele ephikisana ngokubhekiselele kwabaseFilipi 2: 7. I-New American Standard Bible ithi uKristu "wazikhupha", ngoxa iinguqulelo ze- ESV kunye neNIV zithi uYesu "akazange azenzele nto." Ukuphikisana kuyaqhubeka malunga nento yokukhutshwa kwamandla kaThixo okanye i-kenosis ithetha, kodwa sinokuqiniseka ukuba uYesu wayenguThixo ngokupheleleyo kwaye umntu ngokupheleleyo ngokuzalwa kwakhe.
7 - UYesu wayengenalo i-vegan.
KwiTestamente Endala, uThixo uYise wamisa inkqubo yokubingelelwa kwezilwanyana njengenxalenye ebalulekileyo yonqulo. Ngokuchasene nemithetho yeemvgans zanamhlanje ezingadli inyama ngenxa yezizathu zokuziphatha, uThixo akabekeliyo inqobo kubalandeli bakhe. Kodwa, wenza, uluhlu lwezinto ezingcolileyo eziza kugwenywa, ezifana nengulube, umvundla, izidalwa zamanzi ezingenazo iimfesane okanye izikali, kunye nezilwanyana ezithile kunye nezinambuzane.
NjengomYuda othobelayo, uYesu wayeyidla imvu yePhasika ekhonza ngaloo mini ebalulekileyo. Iincwadi zeevangeli zixela ngoYesu odla intlanzi. Iimiselo zokutya zaphakanyiswa kamva kumaKristu.
> Imithombo: I- Commentary Knowledge yeBhayibhile , uJohan B. Walvoord kunye noRoy B. Zuck; I- New Commentary yeBhayibhile , uGJ Wenham, JA Motyer, DA Carson, RT France, abahleli; i- Holman Illustrated Bible Dictionary , uTrent C. Butler, umhleli jikelele; Unger's Bible Dictionary , uRK Harrison, umhleli; gotquestions.org.)
Abagqwiri, abaTyhini kunye nobuGqirha
Ukuxhathisa amaNgqina kaYehova ngamazwi ovuko
Yintoni IBhayibhile Ethetha Ngomfundi?
Ngo-1998 i-US Ivule: uJanzen ufumana uxolo lweStwart ... kwakhona
IiNdaba eziPhezulu zeNdalo
Inkcazo yeRitualism kwi-Sociology
Iiminyaniso zeBhayibhile Ngokududuza
IiRekhodi zokuBhaliswa kwabangaphandle
I-Aquarius in Love - Ukudibanisa kweZodiac
Ukuxinezeleka kwiiLwimi zesiLatin
Ngaba i-Ancestor yam yafika nge-Ellis Island?
Ingxoxo engalunganga kwiRhetoric
Abakwa-Famous Classical Composers
I-Emily Sander Murder Case
Iimeko ezinzima kakhulu zeHag Hag
I-Theory of Steady State in Cosmology
Quotes Hedberg Quotes
Indlela Yokudweba Abalingiswa bee Manga
Iimfuneko ze-12 eziyimfuneko ukuba ufumane i-visa de niñera para Estados Unidos
Umthetho kaRaoult Umzekelo Weengxaki - Utshintsho lweVapor Change
I-Admissions yaseYunivesithi yaseMzantsi Koloni
Iipetroli zePandora kunye noMculo ongenamagama angamahhala wokuFunda